श्रीमान् श्रीमती टाढा हुँदा कसरी यौन चाहना पुरा गर्ने ? - Indian Girls Nude XXX Images
श्रीमान् श्रीमती टाढा हुँदा कसरी यौन चाहना पुरा गर्ने ?
यौन हाम्रो जीवनको अभिन्न भाग हो। हामी आफ्नो यौनचाहना स्वाभाविक रूपमै पूरा गर्ने प्रयास गर्छौं, यो अधिकारको कुरा पनि हो। प्रत्येक समाजले यसलाई महत्त्व दिएको हुन्छ र यसलाई पूरा गर्न सक्ने बाटो खुला गरिदिएको हुन्छ। विवाह गर्ने परम्परा समाजमा महत्त्वका साथ स्थापित हुनुको पछाडि यही कारण हुनुपर्छ, तर प्रायःजसो छुट्टिएर बस्दा यौनचाहना शान्त पार्न हामी प्राकृतिक रूपमै वैकल्पिक उपाय खोज्न थाल्छौं। अध्ययनहरूले नियमित यौनसम्पर्क गर्ने व्यक्ति आफ्नो नियमित साथीसँग छुट्टएिर लामो समयसम्म बस्दा यौनचाहना पूरा गर्ने वैकल्पिक उपायका रूपमा अर्को व्यक्तीसँग यौनसम्पर्क राख्ने गरेको देखाएका छन्। यो धेरै किसिमले जोखिमपूर्ण हुनसक्छ। अर्को, सजिलो बाटो भनेको हस्तमैथुन नै हो।
तपाईंको मनमा किन यस्तो कुरा आयो, थाहा भएन। हस्तमैथुन प्राकृतिक यौन क्रियाकलाप हो। यौन आनन्द प्राप्त गर्ने उपायहरूमध्ये यौनअङ्गको घर्षण नै प्रमुख उपाय हो। सम्भोग गर्दा
यौनअङ्गहरू एक-आपसमा घर्षण गराइन्छन्। मानिसले आफ्नो यौन अङ्गको घर्षण अरू कसैको यौन अंगमा गराए मात्र यौन आनन्द पाउँछ भन्ने होइन। सिद्वान्ततः सम्भोग गर्दा र हस्तमैथुन गर्दा यौनअङ्गको घर्षणबाट यौन आनन्द पाउने प्रक्रिया उस्तै हो। त्यसैले सम्भोग गर्दा हानि नहुने तर हस्तमैथुन गर्दा हानि हुने भन्न मिलेन। यसलाई प्राकृतिक नमान्नेहरूमध्ये कसैले यसलाई पापसँग जोडेका छन् भने कसैले खराब स्वास्थ्यसँग, त्यसैले समाजमा अनेक मिथ्या धारणा व्याप्त छन्। हस्तमैथुन गरे अनुहारमा दाग आउने, आँखाको दृष्टि कमजोर हुने, नपंुसक हुने, विवाहपश्चात् आफ्नो यौन साथीलाई सन्तुष्टि दिन नसक्ने वा शीघ्र स्खलन हुन्छ भन्ने जस्ता भ्रम व्याप्त छन्। यसले स्मरणशक्तिमा पनि ह्रास हुने होइन। दिनहुँ यौनसम्पर्क गरेर वीर्य स्खलन गर्दा वा हस्तमैथुन गरेर वीर्य स्खलन गर्दा प्रजनन क्षमतामा असर पर्दैन।
घर फर्किएका बेला पर्याप्त यौनसम्पर्क हुने बुझिन्छ। यसले पक्कै एकहदसम्म तपाईंकी श्रीमतीको यौन सन्तुष्टिका लागि आवश्यक खुराक पुग्न सक्छ।घर जाने समयको दूरी कम गर्न सकिए श्रीमतीले अनि तपाईंले पनि यौन-सम्पर्कबाट यौनआनन्द प्राप्त गर्न सजिलो हुन्छ।
November 21, 2014 admin	Posted in Most Demanded, Nepali SEX Stories	Post Permalink
← सुन्‍दरीहरु किन लेख्‍छन्, ‘आइएम इन रिलेसनसिप’	सेक्स पावर बढाउने तरिका →